Saturday October 10, 2020 - 18:50:31 in Wararka by Mogadishu Times
Allaha u naxariistee Sheekh Cali Sheekh Maxamuud (Sheekh Cali Tuure),Wuxuu ku dhashay Tuulada Jameeco Fiddo oo 25km bari ka xigta magaalada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe sanadka markuu ahaa 1925ti. Isla tuuladaas ayuu ku bartay, kuna xafiday qu
Allaha u naxariistee Sheekh Cali Sheekh Maxamuud (Sheekh Cali Tuure),Wuxuu ku dhashay Tuulada Jameeco Fiddo oo 25km bari ka xigta magaalada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe sanadka markuu ahaa 1925ti. Isla tuuladaas ayuu ku bartay, kuna xafiday quraanka kariimka ah,dhameystayna sannadki 1941dii. Sannadka markuu ahaa 1943dii wuxuu u soo wareegay magaalada Jowhar, halkaasoo uu ka bilaabay barashada culuumta Fiqiga Islaamka. Sannadkii 1945 wuxuu soo galay magaalo madaxda Muqdisho, oo uu si fiican uga sii bartay Naxwaha Carabiga iyo culuumta Fiqiga masaajidka Waafle ee degmada Boondheere ku yaalla, wuxuuna wax ka aqristay Sheekh Xuseen Cadde, Sheekh Yuusuf Macallin Xasan Muudeey iyo sheekh Muxiddiin Raage. 1947dii wuxuu ku biiray ururki Leegada ee SYL, wuxuuna ka mid noqday Guddiga degaanka Jowhar (Comittato Locale Di Giohar), wuxuuna ka ahaa xubin aad u firfircoon oo siyaasadda ka shaqeysa. Sannadkii 1952dii wuxuu ku soo noqday magaalada Xamar oo uu ka bilaabay inuu ganacsi ka sameeyo kana furtay degmada Xamarweyne goob ganacsi. Isla sanadkaas wuxuu ku biiray ciidanka Ilaalada Dhaqaalaha (Guardia di Finanza) oo markaas ka jiray dalka. Isla markiiba waxaa loo furay tababar lagu baranaayo xeerka ilaalinta canshuuraha iyo dokumeentiga dekadaha. Sannadkii 1954-tii waxaa loo furay tababar kale oo sarkaalnimo toban qof oo uu ka mid yahay, nasiibdarrase waa laga saaray tababarki sabab siyaasadeed awgeeg asaga iyo saddex kale oo Abgaal ah (dhacdadi Gaala jebshe darteed).
Bishii Febbaraayo 1995ti wuxuu u soo wareegay degaan ahaan waddanka Holland Wuxuuna laba mar ka qeybgalay shirki dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay dalka Keenya ,bilowgi marki Eldoret lagu qabtay iyo gebagebadi marki loo soo wareejiyay Magaalada Nairobi, asagoo qeyb weyn kaqaatay ololaha lagu raadinaayay dib u heshiisiinta ummadda Soomaliyeed iyo dib u soo celinta Qaranki Soomaaliyeed ee burburay, nasiib wanaag taas hadda waxbaa ka bilaaban.